Garsoorayaasha kubadda cagta Soomaaliya oo tababar loogu qaadayo Jabuuti – Radio Daljir
Febraayo 28, 2013 1:11 b 0
Gaalkacyo, Feb 28- Maalmaha inagu soo aadan waxaa tababar garsoorka dhanka ciyaaraha kubadda cagtaa uu oga furmayaa tababarayaal dhanka garsoorkaa dalka Jabuuti.
Garsoorayaasha tababarkaasi qorshaysan inay ka qayb galaan ay ka kala socda dhamaanba maamulada gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo loogu kala qaybiyay maamulada dalka ka jira sida DF,Soomaaliland iyo Puntland.
Puntland waxaa laga qaaday afar garsoore oo ka kala socda gobolada Mudug,Nugaal,Karkaar iyo Bari, tababarkaasi oo ku saabsan habka garsoorka ciyaaraha ayaa la filayaa inuu socdo muddo toddobaada.
Magaalada Muqdisho ayaa bari oo jimcaa waxaa ka baxaya garsoorayaasha dalka kuwaasoo isugu tagay shalay isugu tagay Muqdisho si ay isaga raacaan.
Tababar noocaan oo kalaa waxaa u danbaysay dhawr sano ka hor , xiligaas oo gobolka Mudug fursaddaasi uu? ka faa’iidaystay macalin Ilyaas c/nuur oo hada ah gudoomiyaha ciyaaraha fudud ee gobolka Mudug tababarana u ah kooxda Comsed oo ka mida kooxaha ugu caansan deegaanada Puntland.
Garsoorayaasha kubadda cagta Puntland ayaan iyagu inta badan helin tababaro dibaddaa oo ay ku sii hormariyaan khibraddooda iyo aqoontooda hagidda ciyaaraha kubadda cagta.
Tababarkan ayaa la filayaa inuu? wax badan ka badali doono khibradda garsoorka ciyaaraha dalka gaar ahaan kubadda cagta.
Fartuun C/raxmaan C/dille